Ianareo ry frantsay | Hery - Tsiky dia ampy
Marina fa tsy voalohany nandalovako teto Frantsa tamin'ity indray mitoraka ity fa niova mihitsy ny fomba fijeriko sy ny fihevitro momba an'i Frantsa sy ny Frantsay taorian'iny lalàna Sarkouzy iny. Na eny andalana rehetra eny aho dia toa tsy mijery tanàna intsony fa manjary miezaka mijery ny tebiteby eny amin'ny endriky ny olona. Rehefa mandeha metro dia toa hitako izany ny tahotra ao ambadiky ny tsikin'ireo olona hafa loko... indrindra rehefa ilay hivoaka misy polisy iny. Tsy milamina intsony e.
Toa tsy eo intsony ilay toetra nampiavaka an'i La Frantsa hoe tany fandraisam-bahiny... fialokalofan'ireo tsy tafatombona any amin'ny taniny... "terre d'asile". Enga anie ka ny mpitondra ankehitriny ihany no mihevitra toa izany fa ireo mponina kosa dia mbola manana ilay toe-panahy mandray sy tia mandray vahiny. Raha izany dia toa ho hita sahady ny endriky ny voka-pifidianana amin'ny 2007. Dia ho toa ny any Italia koa, handresy ny vondrona Havia... dia ho voatsimbina ireo mpialokaloka.
Izany eo ihany fa dia hotohizana araka ny tokony ho izy ny vacances. Ny namana sy ny havana no dia aty.
Tany amin'ny Mon Tana izahay afak'omaly, nijery Rija Ramanantoanina sy Luc sy Mahery nanao Cabaret. Tsara ihany izy aloha. Ny sakafo no somary tsy dia namely. Betsaka fa tsy dia tena niavaka hoe malagasy. Tsisy ravitoto akoriny. Ny hiran'i Rija koa tena nankafiziko daholo. Dia ny cabaret johary izay efa ananako @ k7 koa nataondry zalahy tao. Manja e. Izahay aloha tsy nandihy fa izy roa vavy no tsy naharitra dia nijaingojaingo nandihy teny :-) (Che schemo). Fa tena hitako hoe hafa mihitsy aty miohatra amin'ny any Italie rehefa misy fety Gasy. Efa betsaka tokoa ny Malagasy aty ka tsy mifankahafantatra intsony. Any Italie mantsy rehefa misy fety gasy izany dia fantatrao daholo ny olona rehetra manatrika ny fety :-)
Omaly indray dia nitsangatsangana eran'i Paris sady nijerijery soldes (Izaho ihany no tena nijerijery fa aiza koa moa no hisy vehivavy hijery fotsiny :-(). Misy gasy ihany nifanena taminay. Isak'izay aleha toa misy gasy miserantserana foana :-)
Androany indray dia ho hita eo ny hatao
Tsy nisy ravitoto akory ! Tena mba ahoana kosa ary izany? :-)
Nampidirin'i sipakv @ 10:50, 2006-07-17 [Valio]
Mifankahalala daholo ve ny malagasy any Italie?
Nampidirin'i Lila @ 20:21, 2006-07-22 [Valio]
lila> Eny... Afats'izay miolonolona tsy miaraka amin'ny olona :-)
Nampidirin'i hery @ 21:33, 2006-07-23 [Valio]